जापानमा आँसु निकाल्न सिकाउने गुरु, नेपालमा गुरु नै चाहिन्न !
प्रकाशित २०७७ पौष २३ बिहिबार
केही दुखको कुरा, सुखको कुुरा सुने आँसु आउँछ । प्रायः हाम्रो समाजमा रुवाइलाई कमजोरीको प्रतीक मानिन्छ । ‘हेर बच्चाजस्तै रोएको’ वा ‘स्वास्नी मान्छेजस्तो आँसुु खसालेको’ भन्ने चलन छ । लोग्ने मानिस रुनुहुन्न, ठूलो मान्छेले आँसु खसाल्नुहुन्न भन्ने हाम्रो परम्पराले मानिसहरु दुःखी हुुन्छन् । मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो पार्न हाँस्नुपर्छ भन्ने त हामीले सुनेका छौं तर ‘आँसु खसाल्नु’ पनि स्वस्थ हुनु हो भन्ने प्रायःलाई थाहा हुुँदैन ।
रुई–कत्सु सेमिनार’ (जापानिज आँसु खसाल्ने सेमिनार) प्रायः धेरैले सुनेका हुँदैनन् । जापानमा ‘हिडेफुमी योसिडा’ (आँसु शिक्षक) पनि रहेछन् । सुुन्दा अचम्म लाग्छ, आँसुु शिक्षकले के सिकाउँदा हुुन् ? म साढे सात वर्षदेखि आँसु शिक्षकको रुपमा काम गरिरहेको छु । ‘मेरो काम भनेको मानिसहरुलाई रुवाएर त्यसबाट उनीहरुलाई स्फूर्ति प्रदान गराउनु हो’, जापानका आँसु शिक्षक भन्छन् ।
नेपालीहरुलाई चाहिँ यसरी आँसु ल्याउनको लागि कुनै शिक्षक चाहिन्न । अनेक बहानामा समय–समयमा रोइरहन्छौं । धेरै समयसम्म नभेटेको साथी वा नातेदार भेट्दा खुशी भएर आँसु खसाल्छौं भने कसैको मृत्युु हुँदा दुस्खी भएर रुन्छौं । त्यस्तै बच्चा जन्मिदा, बच्चाहरु जाँचमा पास हुुँदा पनि खुुशी भएर रुन्छौं । कोही नजिकको मान्छे बिरामी भएको सुुन्दा आँसुु खस्छ भने ऊ निको भएको सुुन्दा पनि आँसु खस्छ ।
रुवाइले रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ । ‘मलाई पहिले–पहिले चिसो लागेर समस्या पथ्र्यो । तर आँसु खसालेर आफ्नो दुःख पोख्ने काम शुरु गरेपछि र हप्तामा एकपटक रुने बानी बनाएपछि मलाई चिसो लाग्न कम भएको छ, रोगसँग लड्ने मेरो शक्ति बढेको छ’, यसरी रुने शिक्षकसँग आँसुु खसाल्न सिकेको एक जापानी बताउँछन् । आँखाबाट आँसुु खसाल्दा शारीरिक र मानसिक फाइदा हुन्छ । यसले मन शान्त राख्न, दुखाइलाई सहन गर्न र मानसिक तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । जापानमा मानिसहरु सजिलै रुँदैनन् । रुनुु कमजोरीको चिह्न भन्ठान्ने धेरै भएको जापानी समाजमा मानिसलाई रुन गाह्रो छ । धेरैजसो जापानीहरु रुवाइलाई रोक्छन् ।
सानो उमेरदेखि नै हामीलाई नरुनू भनेर सिकाइन्छ । अनि आफ्नो आँसु देखाउनुहुदैन भनेर हुुर्कन्छौं । यसले हामीलाई बिरामी बनाउँछ र तनाव गराउँछ’, रुन सिकाउने शिक्षक भन्छन् । ‘प्राय हामी रुनुलाई नकारात्मकरुपमा हेर्ने गर्छौं । यसमा मेरो भूमिका भनेको मानिसहरुलाई नडराउन र यसप्रति रहेको नकारात्मक विचारलाई हटाउन सहयोग गर्नु रहेको छ’, रुन सिकाउने जापानी शिक्षक भन्छन् । नेपालमा धन्य अहिलेसम्म हामीलाई रुन सिकाउने शिक्षकको खाँचो छैन ।
तर लोग्ने मानिसहरुलाई ‘रुँदैमा, आँसु खसाल्दैमा कमजोर हुनु होइन’ भन्ने सिकाउने मानिसको चाहिँ खाँचो छ । महिलाहरुचाहिँ हिन्दी सिरियल वा सिनेमा हेर्दा पनि रोइदिन सक्छन्, आँसु खसाल्छन् । तर लोग्ने मानिसहरुचाहिँ मनमा भक्कानिएर पनि बाहिर केही नभएको जस्तो देखाउँछन् । भित्रभित्रै गुम्सिएर बस्छन् । अनि दुस्खी हुुन्छन् । रोएपछि कस्तो अनुभव हुन्छ भनेर नेपालमा कसैले अनुुसन्धान गरेको पाइएको छैन । हामी सबैलाई भावनात्मक कुुराहरुले छोएपछि आँसुु आउँछ । रुन सिकाउने जापानिज शिक्षक भन्छन्, ‘मेरो विचारमा रुई–कत्सुले हामीलाई अझ राम्रोसँग बाँच्न सिकाउँछ । यसबाट आध्यात्मिक फाइदा पनि छ । रुने कार्यक्रममा आएर आँसु खसालेपछि सहभागीले ज्ञान, ज्योति प्राप्त गरेजस्तो लाग्छ ।’
हिन्दीमा एउटा गीत ‘ये आँसुु मेरे दिल की जुबान है, में रोऊँ तो रो दे आँसु, में हँस दु तो हँस दे आँसु’ अर्थात् मान्छे खुशी हुुँदा, दुुःखी हुुँदा आउने आँसुले मानिसको दिलको भाषा बोल्छ । हामीमध्ये कसैलाई कुनै खुशीको कुरा सुन्यो भने आँखाभरि आँसु आउँछ । कुनै फिल्म हेर्दा वा सिरियल हेर्दा आँसु आउनु वा खुशी हुदा आँसु आउनु कमजोरी होइन भन्ने ठान्नुस् । दिनदिनै हाँस्नु र समय–समयमा आँसु खसाल्नु दुवै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ ।(डा.उप्रेतीको फेसबुकबाट साभार)
तीन महिनाभित्रै सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप लगाइने छ – प्रधानमन्त्री ओली
बुधबार १२ हजारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे कोरोना विरुद्धको खोपको शुभारम्भ, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद
बीच सडकमै अमृतको हत्या गरि भाग्ने नेकपा कार्यकर्ता प्रकाश ऐडीको तस्विर सार्वजनिक
कोरोनाको खोप लगाउन शुरु, टेकुका स्वास्थ्यकर्मीले लगाए खोप
राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन